N'ụbọchị a ka a mụrụ onye edemede Noah Gordon | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
N’afọ 1926, ma n’ụbọchị dị ka taa, Nọvemba 11, onye edemede Noah Gordon mụrụ. Nke a maara nke ọma kacha ere "Dọkịta" Ọ bụ naanị otu ihe atụ nke akwụkwọ ndị magburu onwe ha onye edemede a mepụtara site na ncha ma ọ bụ maka ọrụ anyị ga-ekwu maka ebe a taa dị ka obere ụtụ nye ya. Anyị ga-ahapụrịrị gị ụfọdụ nkebi ahịrịokwu kachasị mma nke anyị maara na ọdịnaya dị na-amasị gị mgbe niile.
1 Noah Gordon's "Dọkịta"
2 Akwụkwọ ndị ọzọ dị mma site n’aka Noa Gordon
3 Ode okwu na okwu sitere n’aka onye edemede
Noah Gordon's "Dọkịta"
Akwụkwọ a na-adọrọ mmasị na-akọwa oke agụụ nke nwoke nke narị afọ nke XNUMX iji merie ọrịa na ọnwụ, belata ihe mgbu nke ụmụ mmadụ ibe ya, ma nye ha onyinye ịgwọ ọrịa dị omimi nke enyerela ya. Ọ na-akọ banyere njem dị egwu nke nwa na-eto eto bụ Rob Cole, ọgụ ya megide ọrịa na ọnwụ, onyinye ya dị omimi maka ọgwụgwọ. Ọchịchọ ya ịghọ dọkịta duru ya si England na-achịkwa obi ọjọọ na amaghị ihe na-akpata ọgba aghara nke Persia dịpụrụ adịpụ. N'ebe ahụ, na mahadum ndị Arab, n'okpuru nkuzi nke onye nkuzi a ma ama Avicenna, mgbanwe ga-eme nke ga-egosi akara aka ya na nke ezinụlọ ya ruo mgbe ebighị ebi.
Genre: Akụkọ ihe mere eme na njem.
Afọ nke mbipụta: 1986.
Ọnụ ọgụgụ peji: 800.
Akwụkwọ ndị ọzọ dị mma site n’aka Noa Gordon
Ọ bụ ezie na "Dọkịta" Ọ bụ iji kwuo okwu kpakpando nke Noa Gordon, onye edemede derela ezigbo akwụkwọ ndị ọzọ ị nwere ike ịmaghị ruo taa:
"Kọmitii ọnwụ", 1969.
"The Jerusalem diamond", 1979.
"Ikpeazụ onye Juu", 1999.
"Sam na umu anumanu ndi ozo", 2002.
«The winery«, 2007.
Ode okwu na okwu sitere n’aka onye edemede
«Medicine dị ka onye na-adịghị ngwa masonry ọrụ (…). Anyị nwere ihu ọma ma ọ bụrụ na n'ime ndụ anyị niile, anyị nwere ike dina otu brik. Ma ọ bụrụ na anyị nwere ike ịkọwa ọrịa ahụ, onye a na-amụbeghị ga-anọ n'ọnọdụ iji nweta ọgwụgwọ ». (Akwụkwọ: "Dọkịta").
“I ghaghi ima na nka bu ihe ndi uka choputara dika amoosu na nmehie nke inwu anwu. Ọ bụrụ na ị nyere m aka ma ha chọpụta anyị, ị ga-ere ọkụ n’elu osisi dịka m. (…) - Ha na-achọrịrị m ka m gbaa m ọkụ, dọkịta m. Ha enweghị ike ịgba m ọkụ karịa otu oge ». (Akwụkwọ: "Ikpeazụ onye Juu").
Ndị mmadụ na-abịakwute gị ka ọdachi na ọrịa na-arịa. Nwata nwoke no na iwu na achu nsogbu. Nwa agbogho di ime na mgbada .... -Ememe ihe m nwere ike. Mgbe ụfọdụ ana m enyere aka. Ọtụtụ oge ndị ọzọ, mba. Mgbe ụfọdụ ọ dịghị onye nwere ike inyere aka. Naanị oge na Chukwu. (Akwụkwọ: "Rabaị").
“M ka nwere mmasị n’ mkparịta ụka ndị ọkammụta na-eso n’usoro ọrụ ọ bụla, wee chọpụta na amatara m ihe m na-anụ nke ọma na nke ọma. (…) A nwara m iwepụta onwe m inye aka na klaasị, mana m ghọtara na a na-akwụ ndị nkuzi ụgwọ, achọghị m ịnara ụgwọ onye ọ bụla ». (Akwụkwọ: "Dr. Cole").
Ejila obi uto rie ya rue mgbe o doro gi anya. (Akwụkwọ: "The winery").
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » N'ụbọchị a ka a mụrụ onye edemede bụ Noa Gordon